Dhagayso: Baranbarooyinka Dukaanda Rinkeby - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waa sawir ku tusinaya baranbarooyinka laga helay dukaankan ku yaal xaafada Rinkeby ee maryaha iibiya, Sawirle: Kasim Abdulkadir / SR International
Rinkeby / Malmö
La daabacay torsdag 22 november 2012 kl 10.01
Xaafada Herrgården ee ku taal rosengård ee magaalada Malmö ayaa wali ay ku noolyiin cayayaanka baranbarooyinku. Kadib markii barnaamijka SVT ee dabagalku u fashilay sannadkii 2008 dib u habayn lagu sameeyay qaar ka mida guryihii ay dhibkani haysteen ayaa hadana lagu soo warinayaa in ay wali dadka degen xaafadaas ay la noolyiin cayayaankaasi.
Wali waxa jira guryo ay ku noolyiin cayayaanka baranbarooyinka
- Waxaan haysananaa baranbarooyiin badan, way na qaniinayaan, waan ka cabsanaynaa, ayey sheegtay hooyo Maryan oo wiilkeedu u turjumayo oo degen dariiqa Ramels väg ee xaafada Hergårgen.
Faamilkan ayaa haysta sagaal caruura degena guri saddex qol ah.
Shirkada guryaha ee AB Gröningen ayaa 867 guri ku leh xaafada Herrgården kuwaaso dib u habayn ku sameeyay kadib markii sannadkii 2008 ay fashilisay idaacada layska daawado ee SVT qaybteeda daba galka ee uppdrag granskning.
Guryo ka mida kuwa ay shirkadani leedahay ayaa waxa dadka kula nool guryahaas cayayaanka barabarooyinka.
Shirkada ayaa guryahan dhigtay dabinka barabarooyinka balse may caawiin oo wali waxa dadka qaar guryahooda kula nool barabarooyin.
-Mararka qaar waxay qaadataa wakhti dheer inta laga saarayo barabarooyinka ayuu sheegay, Emil Öberg oo ah madaxa shirkada cayayaanka ee Anticimex ee ku taal Malmö.
- Waxa dhici karta in ay na wacdaan dadka dhibku ka haysto cayayaankan oo aanu u nimaadno balse ay jiraan dad la darisa oo aan na soo wargalin in ay haystaan dhibkan taaso sababaysa in ay cayayaankani ay ku fidaan qasabadaha ayuu sheegay Emil.
Shirkada guryaha ee AB Gröningen ayaa gabi ahaan guryahooda dhan 867 - guriba u sameeyay dabinka barabarooyinka balse markii ay idaacadayadu booqatay guriga caailada Maryam Jabers, ayaa baranbaro ay ordaysaa korka muraayada musqusha midkalana dhex gashay dabinka yaalaa kijada oo markay buuxsantaba la badalayo.
Dhibaatada ay baranbarooyinkani ku hayaan caailadan ayaan waxba iska badalin saddexdaa sanno ee shirkadu dib u habaynta ku samaysay guryahan.
Sidaaso ay tahayna ayaa shirkada Contentus rabtaa in ay kor u qaado boqolkiiba 40 ijaarka guryahaas.
Malmö oo qudha maaha meelaha cayayaankani ay dadka la noolyiin magaalada Stockholm ayaa dhibco dhaaftay Magaalada Malmö oo haysata jiirar iyo baranbarooyinba.
Sannado badan ayaa xaafada koonfurta caasimada Stockholm dhacda ee Rinkeby suuqeeda loo yaqaan Rinkeby Galleria ay qaar ka mida dukaanada ku yaalaa ay haystaan cayayaanka baranbarooyinka iyo jiirarkaba oo ay dhacdaa in dadka dukaamada wax ka iibsada ay guryaha u qaataan.
Cayayaankaas sida barabarada
Jainaba Davidsson, waa haweynay dukaan nooca dharka gada ku leh xaafadaa Rinkeby mudana la tacaalaysay dhibka cayayaankan.
Taasna ay u racdo qasabado daalay oo biyaha bulaacaduhu ka dareerayaan sida ay noo sheegtay mar aanu booqanay oo ay na tustay qaar ka mida barabarooyinka ay dabinka dukaankeeda yaala u qabtay.
- Ma rabo in aan taabto ayey ku dhawaaqaysaa Jainaba goor ay i tusaysay qaar ka mida barabarooyinkaas iyo alwaax u dhaawacay qoyaanka biyaha bulaacada ee dukaankeeda dhex mara.
Haweenaydan ayaa sannado badan ka haysatay dhibaato cayayaankan.
Haweenaydan ayaa ii sheegtay in ay mararka qaar dadka dukaankeeda wax ka iibsada ay markay guryahooda la tagaan ka dhex halaan barabarooyiin oo ay dib ugu soo laabtaan.
Waan Qajilaa markay dib macaamiishu igu soo laabato
-Waaxaan qashinka ku daray qayb ka mida dharka aan dukaanka ku iibiyo kuwaaso ay ka ku dhex jireen baranbarooyiin, ayeey sheegtay.
Dadka iga gatay ayaa dib igu soo celiyey waxayna ahayd wax laga xishoodo ayey ii sheegtay haweynadan dukaanleyda ahi goor aan ku booqday dukaankeeda ku yaal Rinkeby.
Shirkadda Fast Partner ayaa la wareegay dhismayaasha ku yaal bartamaha xaafadan Rinkeby sannad ka hor, horana waxa u lahaan jiray shirkadii ingiriska ahayd ee aadka loo dhaleeceeyay ee Boultbee.
Labadan shirkadood ee iskaga dambeeyay ayaan wax ka qaban haba yaraatee dhibaatooyinka ka jira suuqan ku yaal Rinkeby.
Saaso ay tahayna ijaarka kor u qaadeen.
Jainaba Davidssonayaa dukankan ay ku leedahay Rinkeby waxay ka bixisa ijaar dhan 30 000 oo kronor bishii. Balse hadda saddex kale oo iyana dukaano ku leh isla goobtan ay dacwad ka gudbiyey shirkadan Fast Partner, iyagoo ka cabanayaa in aanay waxba u qaban. Isla markaasna joojiyey in ay dhiibaan lacagta ijaarka.
Waxaan go'aan ku gaadhnay in aanu joojino bixinta ijaarka ilaa intay ka soo baxayaan shaqadooda, lacagta waxaan dhex u dhignaa hogaanka gobalka länsstyrelsen, balse maxkamada ayey dacwad nooga gudbiyeen. Anakuna mid ayaanu ka gudbinay ayey sheegtay Jainiaba.
Balse madaxa shirkadan u qaabilsan xafaadan Rinkeby Kenneth Seremet, aya gabi dafiray dhibkan loo soo jeedinayo sheegayna in ay dhaleecayni uga timid hal dukaan oo kaliya.
-Wax dacwad ah oo la xidhiidha in ay wax khaldan yiin maanu helin ilaa arbacadii isbuuci hore oo aanu helnay dacwad nooga timid hal dukaan oo sheegay in ay haystaan baranbarooyiin dukaankooda balse wax kale oo jira ma jiro oo aanu ka helnay dukaanada kale ayuu ii sheegay kenneth, isla markaasna waydiiyey in ay wax ka qaban doonaan.
Waxaanu ku jawaabay..
-Isla wakhtigan xaadirka ah ayaan sugaynaa in shirkada antisimex ee ku shuqulka leh cayayaanka in ay baadhitaan ku samayso sida ay wax u jiraan.